Dagaal ka Dhacay Duleedka Marko Iyo Al-shabaab oo Sheegay Iney Saldhig Ciidan Bur-Buriyeen – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Wararkii ugu danbeeyay dagaal khasaare geystay oo maanta ku dhaxmaray duleedka degmada marka ee Gobalka Shabeelaha Hoose, ciidamo katirsan militaryga Soomaaliya iyo kuwa Xoogaga Al-shabaab.
Dagaalka oo ahaa mid xoogan oo labada dhinac aysan isku reeban waxii karaankooda ahaa ayaa lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare labada dhinac kala gaaray, balse aynan jirin cid cara baabi karta cadadka.
Dadka deegaanka oo Simba la hadlay ayaa sheegay iney maqlayeen daryanka hubka cul culus iyo kan fud fudud labada dhinac ay is dhaafsanayeen, balse aysan kala xaqiiji Karin inta ka kala dhimatay Al-shabaab oo weerarka soo qaaday iyo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa duleedka magaalada Marko.
Saraakiil katirsan Militariga dowladda oo Radio Simba la hadlay ayaa sheegay in xoogag katirsan Al-shabaab ay weerar ku soo qadeen saldhig ciidamada Militariga dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Buufow bacaad ee duleedka magaalada caasimada u ah gobalka shabeellaha hoose ee Marka, lakin waxuu ka gaabsaday inuu faah faahin ka bixiyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi xooganaa.
War kasoo baxay Al-shabaab ayaa guulo looga sheegtay dagaalka ka dhacay gobalka Sh/Hoose.
“Ciidamada Al-shabaab ayaa cagta mariyay saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka magaalada marka, halkaasi waxaa saacado maamulayay ciidamadeena, khasaare kala duwan ayaana ku gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa”. Ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al-shabaab.
Maamulka gobalka shabeelaha hoose oo Simba ay la xiriirtay ayaan suura galin xiriirkaasi.
Dagaalka ka dhacay duleedka marka ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid xoogan, lakin aysan kala cadeen Karin, waxyeelada rasmiga ee ka dhalatay dagaalkaasi dhax maray Al-shabaab iyo ciidamada dowladda.
Xiliyada la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa Al-shabaab ay kordhiyaan weerarada qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee lagula kaco masuuliyiinta iyo ciidanka dowladda ee gobalka shabeellaha hoose.